Banky iraisam-pirenena : mahasarotra ny fanarenana ny fitantanana tsy mahomby | NewsMada
Banky iraisam-pirenena : mahasarotra ny fanarenana ny fitantanana tsy mahomby
Arahin’ny Banky iraisam-pirenena maso akaiky ny fomba fiasa eo amin’ny fitantanam-bolam-panjakana. Efa nametraka ny fepetra momba izany ny ao amin’ny filankevi-pitantanana. Mbola betsaka anefa ny tsy mazava, raha ny fanamarihana nataon’ny teknisianina iray.
Tsiahivin’ny teknisianina amin’ny Banky iraisam-pirenena ny fepetra takin’izy ireo momba ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana eto Madagasikara. Fitantanana tsy mahomby no antony mahasarotra ny fanarenana ny toekarena, araka ny fanamarihana nataon’ny filankevi-pitantanan’ny Banky iraisam-pirenena, rehefa nanapaka nanome tosika 55 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy tamin’ny faramparan’ny taona 2015. Mikendry hanamafisana ny serasera sy ny mangarahara izany fanampiana izany hahafahan’ny fanjakana malagasy mandray an-tanana ny toekarena.
Mbola hita ihany, hatramin’izao, ny tarazon’ny krizy nandritra ny dimy taona taorian’ny fiverenan’i Madagasikara ao anatin’ny ara-dalàna. Hita taratra izany amin’ny fitombon’ny tsy anasa, fahapotehan’ny tontolo iainana, tsy fandriampahalemana sy ireo olana maro samihafa mianjady amin’ny fiarahamonina. Nohamafisin’izany teknisianina ao amin’ny Banky iraisam-pirenena izany ny mbola tsy mahamarin-toerana ny tontolo politika eto Madagasikara, ka manahirana ny fahazoana famatsiam-bola avy any ivelany.
Tanjona ny hampihena ny fandaniana
Nosoritan’ny mpamatsy vola fa tanjona ny hampihena ny famoaham-bolam-panjakana sy fanesorana ireo mpiasam-panjakana ambony tsy mahafeno fepetra ; fanomezam-baovao marim-pototra mahakasika ireo orinasam-panjakana, toy ny Jirama, Air Madagascar. Tsy hita mazava anefa ny mangarahara momba ireo.
Andrasan’ny maro indray izao ny mety ho fanovana ny governemanta. Andrasana miaraka amin’izany koa ny famaritana izay vita sy ny tsy vita. Tsy misy tokony hahamenatra ny filazana izany ho fanatsarana ny hoavy, raha hajaina tokoa ny mangarahara.